जेठ २१ : कागजमा मुक्ति लेखिएको दिन ! – Hamropahuch
जेठ २१ : कागजमा मुक्ति लेखिएको दिन !
हाम्रो पहुँच संवादाता २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार मा प्रकाशित
आज जेष्ठ २१ अर्थात विभिन्न आन्दोलन पश्चात हिजोको पुरानो संरचनालाई भत्काएर नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत नेपालमा वसोबास गर्ने करिब ६५ लाख दलित समुदायले भोग्दै आएको जातिय विभेद र छुवाछुत आजकै दिन जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरी कागजमा मात्र सिमित गरिएको दिन हो । हामीले यो दिनको अवसरमा भन्दै किन शुभकामना आदान प्रदान गर्नुपर्ने हो ? जस्तै फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस भन्ने गरिन्छ ।
वास्तबिक प्रजातन्त्र त केहि पहुँच भएका पैसा भएकालाई वि.सं.२०४६ साल यता आयो । अनि फागुन ७ गतेलाई किन मान्नु पर्ने ? त्यस्तै हामी अहिले पनि जातिय विभेद र छुवाछुतको मार अहिलेपनि खेपिरहेका छौ । हाम्रा हजारौ मानिसहरु मारिएका छन्,कुटिएका छन् । जातिय बिभेद व्यापक छ भने यो जेठ २१ गतेलाई किन छुवाछुत मुक्त दिवस भन्नुपर्ने ? कागजमा मात्र लेखेर कुनै दिवस मनाएर हामी छुवाछुत मुक्त भएका त छैनौ नि ? त्यसैले हामीले यो दिवस मान्नुको कुनै औचित्य छैन् ।
हो हामिलाई भ्रम पारेर रोटि सेक्ने हरुलाई राम्रै छ । हामिले बुझ्नु पर्छ के कारणले गर्दा यति धेरै आन्दोलन अनि सबै भन्दा पाको अर्थात ७५ बर्ष सम्म संघर्ष गर्दा पनि छुवाछुत कायमै छ ? कुरा स्पष्ट छ हामि जुन दिन राजनैतिक पार्टीका झोला उनीहरुलाई बुझाई स्वतन्त्र रुपमा आन्दोलित हुदैनौं तबसम्म हाम्रो मुक्ति हुने वाला छैन् । म किन यसो भन्दै छु भने तपाई हामिलाई कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको सदस्यता लिदाँ त्यहाँ भनिएको हुन्छ कि संगठनको निति सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै यो सदस्यता लिन्छु भनिएको हुन्छ ।
अब भन्नुस कि उनीहरुको निति हाम्रा बिरुद्ध छन् । त्यसैले हाम्रो समुदाय कुटिदा मारिदा उनीहरु चुप लागेर बस्छन् । जुन हामीले अजित मिजार मारिदा , मना सार्कि मारिदा, बिजय राम र निरंजन राम मारिदा र अति ठुलो जघन्य अपराध रुकुम पश्चिममा हुदाँ कुन राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ता नेता हामी संग मैदानमा आए ? अह कोहि पनि आएनन् । किन आएनन भन्दा उनीहरु हामि दलित समुदाय प्रति उदासिन छन् । हाम्रो मुद्धा अर्थात छुवाछुतप्रति कुनै चासो छैन् ।
जुन जसले छुवाछुत कतै न कतै उ पार्टी संग जोडिएको छ । सके नाता पाता पनि पर्न सक्छन् । जुन ठुलो कम्युनिष्ट पार्टीका नेता जनार्दन शर्मा र किशोर नेपाल पत्रकारले रुकुम पश्चिमको घटनामा देखाई सकेका छन् । अझ पनि हामिले न बुझि बस्ने त ? राजनैतिक पार्र्टीले हामीबाट मात्र भोट कसरी लिने ? भनेर सोचेका छन् । जस्तै अहिले के.पि.ओलिको अल्पमतको सरकारले भत्ता बढाइ दियो । अब हाम्रा बुढा आमा बाबुले भत्ता पाउने भए ।
दलित समुदायका आमा बाबाले पनि भत्ता पाउनु हुनेछ । अब उहाँहरुको मनमा केपि सरकारले भत्ता बढाई दियो भन्दै आफ्नो अमुल्य भोट दिनु हुने छ । तर के.पि.ओलिले जातिय बिभेद र छुवाछुत हुदा किन बोल्दैनन?भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नु हुन्न् । मैले के.पि.ओलि को मात्र कुरा गर्न खोजेको होइन न शेरबहादुर देउवाले गर्लान न राम चन्द्र पौडेलले गर्लान् ।
न कमल थापाले गर्लान् । न माधव नेपाल ,झलनाथ खनालले गर्लान् । न बिप्लव ,मोहन बैद्ध्य र आहुतिले गर्लान् । उनीहरुले किन यसो गर्दैनन् भन्दा भोलि उनिहरुलाई भोट चाहिन्छ । बहुदलिय व्यबस्थामा भोट नै लुट्ने माध्यम हो । अर्को कुरा बहुदलिय व्यबस्थामा हामी दलित समुदायले के पायौ ? हामि जतिसुकै धनि लिभिंग स्टायण्डर उच्च भए पनि आखिर घरबाट बाहिर आउँदा त्यही जातिय बिभेदबाट अपमानित हुनुपर्छ भने यो व्यबस्थाका लागि लडेर हामिले के पायौ ? अन्यथा अर्थ नलागोस् यो व्यबस्था नै परिवर्तन गरेर हामी हरुको जातिय विभेद अन्त्य हुन्छ भने हामी त्यो बाटोमा जानुपर्छ । हामी कसैको मोज मस्तिका लागि बलिको बोका हुनुहुदैन् ।
देखियो नि गणतंत्र पनि सत्ताका लागि जे पनि गरिरहेका छन् । देख्नु भएकै छ संबिधान एका तिर छ अनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एकातिर छन् । अलिकति फरक प्रसंग जोड्न खोजे माफ गर्नुहोला । धारा ७६ को ३ अनुसार सरकार बनेमा ३० दिन भित्रमा संसदमा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न पर्छकि पर्दैन ? पर्छ । अनि त्यो नहुँदै किन धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार बनाउन बोलाइयो । उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था हुदा हुदै किन उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधि सभा भंग गराइयो । मैले यो उदाहरण मात्र दिएको हो । संविधान मिचेर यस्तो गर्न मिल्छ् कि मिल्दैन ? यो सबै सत्ताको लुछाचुडि मात्र हो । हामीहरु उनीहरु यस्तै गर्लान भनेर हामि लडेका होइनौ ।
केपी ओलि लगायत अरुलाई पनि यस्तै गरेर सत्ता मोज गर हामि अपमानित भएर बसौला वा हाम्रो समुदायका केहि थानलाई मन्त्री बनाउ भनेर हामीले भनेका त होइनौं । हाम्रो समुदायका ए.बि.सि. कोहि सांसद र मन्त्री त भए नि खोइत छुवाछुत अन्त्य भएको ? हामी त सम्मानित जिवनयापन गर्नका लागि लडेका हौं । छुवाछुतबाट मुक्ति पाइन्छ भनेर लडेका हौं । त्यसैले अब नयाँ बिचारका साथ अगाडि बढांै । अर्को कुरा यो ब्यबस्था नै परिवर्तन गरेर वा संसदिय व्यवस्था नै खारेज गरेर हाम्रो जातिय बिभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने विश्वासिलो आधार तयार हुन्छ भने हामी त्यो बाटो पनि जान सक्नुपर्छ ।
हामी यो बिषयमा पनि सोचौ । भरसक हामीले छुवाछुतको मुद्धालाई साझा मुद्धा बनाउन खोज्दै छौ । यो देश विकासको बाधक छ । मैले देखेको छु । बडो चर्का कुरा गरेर शसस्त्र युद्ध गरौं भनेको पनि सुनिरहेका छौ। काटेर मारेर समस्याको हल हुदैन् । मार्न जान्छु भन्नेले मलाई पनि मार्छन भन्ने कुरा हेक्का राख्दा राम्रो हुन्छ । त्यसैले भौतिकवाद र अध्यात्मकवादको मिश्रणबाट नयाँ बिचार निकालि संसारलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । अमन चयन हुनेछ ।
त्यसैले हामि पर्यासरत छाै। हामी जुन दिन छुवाछुत मुक्त समाज निर्माण गर्ने छौ । त्यही दिन जातिय छुवाछुत मुक्त घोषणा गर्ने छौ । याे कागजको मुक्ति हामिलाई आबश्यक छैन् । बरु आज बाट नै संकल्प गराै । पूर्वीय दर्शनलाई संसार भरि फैलाउनु छ । अमन चयन पक्कै पनि हुनेछ ।
स्थानिय सरकारको बजेट बिहीबार प्रस्तुत
सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने विपक्षी गठबन्धनमा तयारी